IGrisi yandisa imvume yokungafikelelwa kwabakhenkethi baseRussia
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseGrisi zokuPhula » IGrisi yandisa imvume yokungafikelelwa kwabakhenkethi baseRussia
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseGrisi zokuPhula • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Iindwendwe ezivela eRashiya ngoku ziyavunyelwa ukuba zingene eGrisi ukuba zinesatifikethi sokugonya i-coronavirus, okanye isiphumo esibi sovavanyo lwe-PCR, okanye isatifikethi se-antibodies ze-COVID-19.
Ukufika kwabo eGrisi, iindwendwe ezivela eRashiya zinokucelwa ngokungahleliwe ukuba zithathe uvavanyo lwe-coronavirus
Isinyanzelo seentsuku ezisixhenxe zokuvalelwa kwabantu ekufikeni sele kuphakanyisiwe kubahambi abatsha
Ukusukela nge-10 kaJuni, inani leenqwelomoya e-Moscow-Athene indlela inyuswe yaya kwisibhozo ngeveki
Amagosa aseburhulumenteni eGrisi abhengeze ukuba ngesigqibo esenziwe ngabaphathiswa, imvume yokungafikelelwa kwesabelo seendwendwe ezivela kwiRussian Federation yandisiwe kude kube nge-21 kaJuni.
Isigqibo esitsha senziwe emva kwezigqibo zangaphambili xa inani lokungena lama-4,000 baseRussia ngeveki lacinywayo. Isinyanzelo seentsuku ezisixhenxe zokuvalelwa kwabantu ekufikeni sele kuphakanyisiwe kubahambi abatsha.
Abakhenkethi baseRussia eGrisi kufuneka bazalise iFom ye-Passenger Locator Form (i-PLF) kwiwebhusayithi karhulumente, benikezela ngeenkcukacha zabo eGrisi, kusuku olungaphambi kokufika kweli lizwe. Iinkampani zothutho kufuneka ziqwalasele ubukho bayo ngaphambi kokukhwela umgibeli, kwimeko yokophula ziya kunyanzeleka ukuba zimbuyisele ekhaya umkhweli ngeendleko zazo.
Ukufika kwabo eGrisi, iindwendwe ezivela eRashiya zinokucelwa ngokungahleliwe ukuba zithathe uvavanyo lwe-coronavirus. Iziphumo kufuneka zifunyenwe kwindawo yokungena kwilizwe. Kwimeko yesiphumo esifanelekileyo sovavanyo, umgibeli kuya kufuneka abeke yedwa iintsuku ezili-10.
Ukusukela nge-10 kaJuni, inani leenqwelomoya e-Moscow-Athene indlela inyuswe yaya kwisibhozo ngeveki. Aeroflot kwaye Aegean Airlines sebenzisa iinqwelomoya ezine.